बृटिस जनताले तिरेको करबाट जम्मा हुन आएको अर्थ मन्त्रालयको सुरक्षा बजेटबाट मात्र सेवारत बृट्रिस गोर्खा सेनालाई तलब दिइन्छ, वा त्यो भन्दा अर्को स्रोत छ ? धेरैलाई ख्याल नभएको हुन सक्छ । नेपाली नागरिकलाई गोर्खाको उपमाबाट जागिर दिएर बृट्रिस सरकारले बेरोजगार ब्यवस्थापनमा ठूलै टेवा दिएको छ । उसो त बृट्रिस सेनाको माथिल्लो र संवेदनशिल विभागमा समेत गोर्खालीलाई विश्वास गरि जिम्मेवारी दिनु भनेको गोर्खाली प्रति विश्वास गरयो, त्यति सम्म पनि हाम्रो योग्यता रहेछ भनी चित्त बुझाउने ठाँउ पनि हो । बृट्रिसले नेपाली युवाहरुलाई रोजगारी त दियो तर उनीहरुलाई तलबको ब्यवस्थापन कसरी हुन्छ र गोर्खा संग मिल्दोजुल्दो अन्य सेनाहरुको इतिहास तथा ब्यवस्थापनबारे संक्षेपमा चर्चा गरौ ।
हाल बृट्रिस गोर्खा सेनामा बहाल ३ हजार र अंग्रेज युनिटहरुमा मिसिएर सेवागरिरहेका करिब १ हजार गरि जम्मा ४ हजारको हाराहारीमा सेवारत छन भने सन् २०१९ को अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार पेन्सनर जम्मा ३८ हजार मध्ये २१ हजार युकेमा भित्रिएका र बाँकी १७ हजार नेपालमै रहेका छन् । गोर्खा सेना भर्ना र ब्यवस्थापनको निम्ति पोखरामा एक ठूलो क्याम्प र काठमाडौंमा पनि एक क्याम्प अनि प्रत्येक प्रदेशहरुमा पर्नेगरि लगभग एकदर्जन वेलफेर कार्यालयहरु रहेका छन् । पछिल्लो समय गोर्खा भर्तिको संख्या समेत बढाएर प्रत्येक बर्ष लगभग ४ सयको संख्यामा भर्ति गर्दै आएका छन् । नयाँ भर्ति भएकालाई पोखराबाट लण्डन पुरयाउनु साथै सेवारत सेनाको आपतविपतमा सरकारको खर्चमै नेपालमा पुरयाउनु, फर्काउनु आदिको खर्चलाई जोड्ने हो भने हामीलाई खर्चको तथ्याङ्ग अस्वभाविक लाग्छ ।
गोर्खा सेनाको निम्ति कसरी बजेटको ब्यवस्थापन हुन्छ त? प्रथमतः ब्रुनाई सानो तर धनी मुलुकलाई बृट्रिस सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । त्यहा बृट्रिस गोर्खा सेनाका बहाल मध्ये ७ सय देखि १ हजार सेना सपरिवार रहने गरेको छ । उनीहरुको सेवासुविधा र प्रयोग गर्ने हातहतियार लगायतको निमित्त प्रत्येक बर्ष ठूलो रासी ब्रुनाई सरकारले बृट्रिस सरकारलाई दिदै आएको छ । सन् २००९/१० ताका अनुमानित ६७ मिलियन पाउण्ड (आधिकारिक होइन) प्रत्येक बर्ष प्रदान गरेको सुन्नमा आयो । धेरैले त्यो भन्दा धेरै दिने गरेको दावी गरेपनि प्रमाण कतै सार्वजानिक भएको छैन, सधै माथिल्लो तहमा गोप्य रहने गरेको छ । त्यस्तै ब्रुनाई मै पेन्सन भएका पूर्व गोर्खाहरुलाई गोर्खा रिजर्भ युनिट (जिआरयु) भनी १५ सयको हाराहारीमा ब्रुनाई सरकारले रोजगारी दिएको छ । त्यसको शुरुवाती समयको ठेक्का पनि बृट्रिस अफिसरहरुबाट भएको देखिन्छ र त्यो जिआरयू खडा गरि निरन्तर संचालन वापत बार्षिक कति बृट्रिस सरकारले लिन्छ वा लिदैन कतै खुलाईएको छैन ।
त्यस्तै सिंगापुर गोर्खा पुलिसमा २ हजार नेपालीहरु सेवारत छन् । सिंगापुर पुलिसमा प्रत्येक बर्ष अनुमानित डेढ सयको संख्यामा नयाँ भर्तिे गरेर सिंगापुर पठाउने जिम्मा बृट्रिस गोर्खा क्याम्प पोखराले गर्दै आएको छ । छनौट भई सकेका युवाहरुलाई बृट्रिस र सिंगापुरले आआफ्नो आवश्यक भर्नासंख्या अनुसार बाँड्ने गरेका छन् । सिंगापुर पुलिस क्याम्प सिंगापुरका मुख्यमुख्य जिम्मेवारीहरुमा बृट्रिस सेनाकै बहाल अफिसरहरुले पालैपालो नेतृत्व गर्ने गरेका छन् । त्यसले प्रष्ट के देखाउछ भने सिंगापुर गोर्खा पुलिस ब्यवस्थापन र संचालन बृट्रिस सरकार मातहतबाट हुन्छ ।
यसरी ब्रुनाई सरकारको निमित्त बहाल करिब १ हजार गोर्खाली सेना तैनाथ गरे वापत प्रतिबर्ष कति पैसा ब्रुनाईबाट बृट्रिसले लिन्छ? पेन्सन भएका गोर्खाहरुको पुनसेवा जिआरयूका करिब १५ सय गोर्खा वापत कति पैसा लिन्छ? र सिंगापुरमा रहेका करिब २ हजार भन्दा बढि गोर्खा पुलिस ब्यवस्थापन र संचालन वापत प्रत्येक बर्ष सिंगापुर सरकारबाट कति पैसा बृट्रिस सरकारले लिन्छ? कति दिन्छ र लिन्छ भन्ने कुरा कतै आधिकारिक जानकारी दिने गरेको पाइन्दैन तर लिन्छ भन्ने चाहि घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । यी तीनतिरबाट आउने बजेटलाई ख्याल गर्ने हो भने बृट्रिसले फाइदा गरेको विश्वास गर्न सकिन्छ । हुन त संसारमा घाटाको ब्यापार कसले पो गर्छ र? यसरी सरसर्ति हेर्दा गोर्खा सेनालाई युकेको ट्याक्सबाट संकलन भएको बजेटबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्दैन । आम बृट्रिस नागरिकलाई समेत यी तथ्य थाह छैन । रक्षा मन्त्रालयको बजेटबाटै गोर्खा बृट्रिस सेनाले तलब तथा पेन्सन लिईरहेको मात्र सम्झन्छन तर यसरी ब्रुनाई, सिंगापुरबाट बजेट ल्याई पूर्ताल वा फाइदा गरेको कुरा कतै चर्चा हुदैन । बहाल गोर्खाहरुलाई रक्षा मन्त्रालयको प्रणालीबाटै तलब, पेन्सन भुक्तानी भएपनि सो रकमकै हाराहारी वा त्यो भन्दा बढि आउने गरेको देखिन्छ । उसो त बृट्रिस प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र पार्लियामेन्टबाट गोर्खा सेनालाई आधिकारिक रुपबाटै बृट्रिस सेनाको मान्यता (बिबिसी, २००४, बिबिसीडटकोडटयुके) दिएपछि बहाल र नयाँ भर्ति भएकाहरुलाई तलब, सेवा, सुविधा सबैमा अंग्रेज सेना संग कुनै भिन्नता छैन ।
कुनै बेला नेपालीहरु गोर्खा सेनामा भर्तिभए बापत प्रतिब्यक्तिको दरले नेपालका राणाहरुले रोयल्टि लिएका र पछि राजदरबारमा रोयल्टि तिर्छन भन्ने सुनियो तर दरबारले रोयल्टि लिएलिएन तथ्य भेटिन्दैन यद्यपी रोयल्टि तिर्नुपर्छ भन्ने सम्झौता चाहि चर्चामा छ । जब राजतन्त्रको अन्त्य भयो त्यो संगै रोयल्टि आउनमा पनि पूर्णविराम लागेको मानिन्छ । उक्त रोयल्टिलाई पनि डिपार्टमेन्ट फर इन्टरनेशनल डिभलपमेन्ट (डिएफआईडी) अर्थात धनी मुलुकहरुले आफ्नो कुल बजेटको १ प्रतिशत अनुदान गर्ने परम्परा अन्तर्गत संचालनमा रहेको डिएफआईडी प्रोजेक्टमा थप्ने गरेको पनि सुन्नमा आयो तर त्यसको पनि प्रमाण छैन ।
नेपालीहरु विदेशमा गई काम गर्ने प्रचलन शुरु भएको पनि दुई शताब्दी भन्दा बढि भएको छ । विदेशमा कामदार पठाउने मुलुकहरु मध्ये नेपाल, फिलिपिन्स पछि दोस्रो हो । आफ्नो नागरिक कहाँ, कसरी र कस्तोकस्तो ब्यवस्थापनमा काम गरिरहेको छ भनेर जानकारी राख्नु सरकारको दायित्व हो । नेपालको पहिलो डायस्पोरा निर्माण गर्ने गोर्खाभर्तिको भविश्य चाहि ब्रुनाईमा निर्भर छ पनि भनिन्छ । बेलाबखत ब्रुनाईको सुरक्षा जिम्मा अष्ट्रेलियाले लिने पनि चर्चा आउने गरेको छ । यदि त्यसो भएको खण्डमा गोर्खाको संख्या कटौती हुन्छ नै तर गोर्खाभर्ति पूर्ण बन्द वा निरन्तर हुन्छ भन्न सकिन्न । समय सापेक्ष परिस्थती बदलिन्दै जानेछ जेजस्तोहोस गोर्खालीको पीडावेदना र आवाज गुञ्जिरहेको छ । गोर्खालीहरुको ब्यवस्थापन पक्षलाई बुझ्न सकेमा भावी नीत तथा योजना बनाउन सहयोग पुग्नेछ । यी तथ्याङ्कहरु हेरेपछि बृट्रिस सरकारलाई केवल दाताको रुपमा मात्र बुझ्नु पनि पूर्णता होइन ।